Alaab -qeybiyeyaasha Sanduuqa Wax -soo -saarka iyo Warshadda - Soo -saarayaasha sanduuqa Beeraha ee Shiinaha
Sanduuqa Qalabaysan ee ahama ee Dahabka ah
Qurxinta qolka casriga ah: sanduuqan ubaxyada leydiinka moodada leh ee moodada leh ayaa muujinaya qaabkiisa qurxinta. Fudud oo xarrago leh. Naqshaddan ugu yar ayaa leh dabool budo madow ah oo nadiif ah si loo nadiifiyo. Nidaamkani wuxuu u adkaysan karaa xoqidda, burburka iyo midabaynta.
l Naqshad: Sanduuqa ubaxa ee leydiinka u yar.
l Cabbirka la heli karo: 16 ”x 3.2” x 3.5 ”.16” x 8 ”x 3.5” .32 ”x 3.25” x 3.5 ”.ama la habeeyay.
l Dhammee: Budada raaga oo dahaarka leh ee dahaarka leh.
l Waqtiga Sample: 5-7 maalmood. Waxaan u gudbin doonnaa habka waqti ka waqti.
l Tayada: oo ka samaysan 304 birta birta ah oo aan waarayn, geeska ubadkan ubaxyada dheer waa la tolay si loo hubiyo in weelkaaga ubaxa ah ee cidhiidhiga ahi aanay biyuhu ahayn. Iyada oo dhumucdiisuna tahay 1.5mm, waxaad dareemi kartaa tayada iyo cimri dhererka weelka ubaxa. 100% kormeer tayo leh ka hor inta aan la soo dirin si loo hubiyo in shay kasta lagu raro xaalad aad u wanaagsan.
l Iibso: Waa hab fiican oo banaanka loo soo geliyo booskaaga. Ku habboon ku -sii -haynta sii kordhaysa, cawska, iyo dhirta yaryar.
l Qaab -dhismeedka Warshadaha Casriga ah: wuxuu ku habboon yahay qurxinta guri kasta oo leh qaab fudud iyo wax bir ah oo aan bir lahayn.
l Maxaa gaar ah: Waxaa ku jira 4 suuf caag ah oo aad u hooseeya - Si sahlan loo rakibo, waxay bixisaa xasillooni korodhay, waxayna ilaalisaa geedaha iyo dusha aad dhigato.
l Nidaamka beerta guriga: Ku beero geedo cusub & khudaar sanadka oo dhan beertan geedo -geedka gudaha ah; Had iyo jeer cusub, had iyo jeer maxalli ah, had iyo jeer xilli.
l OEM & ODM: Waxaan samaynaa dhammaan alaabooyinka biraha loo habeeyay, sidoo kale kooxdayada naqshadeynta xirfadda leh waxay abuuri karaan naqshado iyadoo loo eegayo fikradda macaamiisha.
Sanduuqa Beerta Casriye ee Casriga ah
l Aad Loo Isticmaalo: Sanduuqan wax -beerista windowsill -ka waxaa loo isticmaali karaa siyaabo kala duwan. Waxay u noqon kartaa meel dhexe oo aad u qurux badan miiska qolka cuntada ama armaajada buugtaada. Waxay hayn kartaa noocyo kala duwan oo geedo yaryar ah sida cactus, succulents, ubax, iyo geedo kale oo badan oo guryaha nool ah. Badeecadeenu ma aha oo kaliya inay qabato dhirta gudaha, waxaad u adeegsan kartaa inaad ku haysato shumacyo, qurxinta musqusha iyo waxyaabo kaloo badan. Waxay ku habboon tahay baahiyaha naqshadeynta gudaha.
Beeraha beerta naqshadeynta casriga ah
Sanduuq -beeleed fudud oo xarrago leh ayaa keligiis ka dhigaya bayaan qurxin ah. Waxaa ku jira daloolka daloolka - waxaa ka mid ah digsi la kala saari karo oo aan kala go 'lahayn. Ku dar shabag dalool dalool - geli gudaha si aad u daboosho daloolka godka si looga hortago in carradu ka dhacdo daloolka godka iyada oo la oggolaanaayo dheecaanka iyo in ciidda la hawo si kor loogu qaado koritaanka dhirta.
Qabatooyinka Furaha Furaha, Qaansarka Warshada Darbiga, Hanjabaadda Dheriga Dhirta, Coat Hanger Rack Hooks, Farshaxanka Darbiga Birta, Qabanqaabiyaha Hook Furaha,